Ama-CBD FAQS - Zama i-CBD enokuthula
Imibuzo evame ukubuzwa ye-CBD
Buza kude nokuthi uma une- umbuzo lokho akuphendulwa lapha, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi
ku-256-302-9824 noma usithumele i-imeyili ku-tour@trytranquil.net.
I-CBD kuyinto eyenzeka ngokwemvelo yesitshalo se-hemp. Kuyi-phytocannabinoid engadakisi enikeza uhla lokusetshenziswa komzimba wonke. I-CBD ingenye nje yamaphytocannabinoids amaningi namanye ama-phytochemicals atholakala ku-hemp.
Kuyini uwoyela we-CBD?
Uwoyela we-CBD utholakala ezitshalweni ze-hemp ezinamazinga aphezulu we-cannabidiol (CBD) namazinga aphansi we-THC. I-CBD enokuthula ikhiqiza uwoyela we-CBD osezingeni eliphakeme emakethe, okhishwe ezitshalweni ezinempilo, ezicebile ze-CBD ezitshalwe khona lapha e-USA.
Wenziwa kanjani uwoyela wethu we-CBD?
I-hemp yethu i-Food Alliance eqinisekisiwe, ikhulile futhi ivunwa emapulazini ethu e-Alabama naseKentucky. E-Tranquil Farms, sisebenzisa i-cryo ethanol extraction ukukhiqiza i-decarboxylated crude ebandiswe ngokuphelele ebusika, esanda kwenziwa i-distillate egcwele ngokugcwele ngezindlela eziholayo zokuphuzisa iziphuzo (okusho i-spd ne-wfd).
Uyini umehluko phakathi kwe-hemp nensangu?
Ngokwesayensi, i-hemp yezimboni nensangu kusitshalo esisodwa, esinegama lohlobo lwezinhlobo ze-Cannabis sativa. Banomlando oyingqayizivele wofuzo, noma kunjalo. Ngokuvamile, yezimboni hemp inemicu emide kakhulu eneziqu ezinde eziqinile nezimbalwa zezimbali eziqhakazayo. Izitshalo zensangu zivame ukuba zincane, zibe bushier futhi zigcwele izimbali. Kodwa-ke, izinhlobo ezintsha ze-hemp zezimboni e-USA zenziwa ukuba zibe nezimbali eziningi nezithelo eziphakeme zama-cannabinoids nama-terpenes, njenge-Kentucky hemp esiyisebenzisayo manje. Isikhathi esiningi, insangu inenani eliphakeme le-THC nenani eliphansi kakhulu le-CBD. I-hemp, ngakolunye uhlangothi, ngokwemvelo inamanani aphezulu we-CBD (ezimweni eziningi) futhi ilandelela amanani we-THC kuphela. Ngenhlanhla, iphrofayili ye-cannabinoid ye-hemp ilungele abantu abafuna izinzuzo ku-cannabis ngaphandle 'kokuphakeme.' Ngokomlando, i-hemp isetshenziselwe ukwenza imikhiqizo yokudla, i-fiber, intambo, iphepha, izitini, uwoyela, ipulasitiki yemvelo, nokunye okuningi. E-US, insangu ivame ukusetshenziselwa ukuzilibazisa nokwelapha. Igama elithi "uwoyela wensangu" lingabhekisa kumuntu insangu noma uwoyela osuselwa ku-hemp, ngoba insangu ne-hemp kuyizindlela ezimbili ezihlukene zensangu. Wonke amafutha ka-Tranquil CBD atholakala ku-hemp.
Ingabe amafutha e-CBD asemthethweni?
I-CBD evela ku-hemp itholakala kabanzi kulo lonke elase-USA. Ku-2018, ukubuyekezwa koMthethosivivinywa Wasepulazini lase-US kugunyaze ngokusemthethweni ukutshalwa kwe-hemp kwezohwebo ngaphansi kwemithetho ethile. Imikhiqizo ye-CBD enokuthula itholakala e-American hemp ekhulile, ephezulu ye-CBD futhi ihambisana neTotal T. Ngokuziqhenya sinikela ngokuthunyelwa kwamahhala, izaphulelo zabadala, kanye nezinketho zokuthenga ngobuningi kuyo yonke imikhiqizo yethu.
Kufanele ngiyigcine kanjani i-CBD yami? Iyini impilo yeshalofu?
noma impilo engcono kakhulu eshalofini, umkhiqizo wakho oThule kufanele ugcinwe endaweni enomswakama ophansi, opholile, omnyama kude nelanga eliqondile. Lokhu kuzosiza ukugcina izakhiwo zokukhishwa kwe-hemp. Uma i-CBD egcinwe kahle ingaba neminyaka engu-1 eshalofini.
Ngizohluleka yini ukuhlolwa kwezidakamizwa uma ngithatha imikhiqizo ye-CBD?
Uwoyela weTranquil CBD ususelwa e-USA esekhulile yezimboni, futhi ingaqukatha amazinga we-THC angaphansi kuka-0.3%. I-CBD enokuthula ayiqinisekisi ukuthi uzodlulisa noma ngeke udlule isikrini sezidakamizwa ngemuva kokudla imikhiqizo yethu. Kungenzeka ukuthi ukulandelwa kokuqukethwe kwe-THC kungavela ekuhlolweni kwezidakamizwa ezahlukahlukene.
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokusebenzisa?
Imikhiqizo ye-CBD enokuthula iyatholakala ngezinhlobo ezahlukahlukene. Sinikela ngamafutha e-CBD alula, amsulwa, futhi asebenzayo, futhi asetshenziswa ngokubeka amaconsi ngaphansi kolimi. Sinikezela ngomkhiqizo ongaqhamuki, ohlinzeka ngohlelo olungenazinkinga, olulula olusebenza kakhulu ekuhambeni futhi likuvumela ukuthi ukhombe ngqo lapho ufuna ukukhomba izinzuzo ezihlala njalo. Siphinde futhi sinikeze ukhilimu oyisihloko, ofakwa uwoyela, olula, futhi ohlala isikhathi eside, ngenkathi unikeza izinzuzo eziningi zempilo. Sicela ubheke ngebhulogi yethu namakhasi ahlukahlukene womkhiqizo ukuthola ukuthi imuphi umkhiqizo ongakulungela kakhulu wena nezidingo zakho.
Cha. Yonke imikhiqizo yethu yokukhipha i-hemp yenziwa nge-hemp yezimboni nge Amazinga eTHC ngaphansi kuka-0.3%. Awukho umphumela odakayo ekuthatheni imikhiqizo yethu.
Iyini inqubomgomo yokuthumela ye-Tranquil CBD?
Ukuhanjiswa Kwasekhaya e-United States kungu- $ 7.99 nge-oda ngalinye futhi kuzothunyelwa ngeFedEx kusetshenziswa ukuthunyelwa kwamahora angama-48. Isikhathi sethu sokuphatha izinsuku ezimbili zebhizinisi. Ngiyacela, vumela izinsuku zebhizinisi ezi-2 ukuthola i-oda lakho. Asithumeli e-Idaho, eMontana, noma eSouth Dakota.
Ukuthumela Kwamanye Amazwe kungu- $ 25.00 nge-oda ngalinye. Ukudiliva ngokuvamile kuthatha phakathi kwezinsuku ezingu-7-21 ukufika. Izinsuku zokulethwa okuqinisekisiwe noma izikhathi azitholakali ngokuthumela Kwamanye Amazwe.
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthola umkhiqizo wami?
Imvamisa uzothola umkhiqizo wakho kungakapheli izinsuku ezi-3 kuye kwezingu-4 zokusebenza kuma-Domestic United States oda. Ama-oda aphesheya avamise ukuthatha izinsuku eziyi-7-21 kepha awanakuqinisekiswa.
Ukubuyisela nokubuyisela imali
Konke ukuthengwa okuthengwe kuleli sayithi kungu-FINAL. Ukubuyiselwa, noma isicelo sembuyiselo sizokwenqatshwa.
Amazwe esingathumeli kuwo e-United States
Ngenxa yemithetho yenhlangano yase-US, sithumela imikhiqizo ye-CBD kuzo zonke izifundazwe zase-US ngaphandle kwase-Idaho, Wyoming naseNingizimu Dakota. Asithumeli lezi zifundazwe.